आँचल र डा. उदिपको विवाहमा करोडौं खर्च, ह्यातमा आज भव्य रात्रिभोज – " सुलभ खबर "
आँचल र डा. उदिपको विवाहमा करोडौं खर्च, ह्यातमा आज भव्य रात्रिभोज
काठमाडौं, १ चैत्र । चर्चित नायिका आँचल शर्मा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन् । पेशाले चिकित्सक रहेका डा. उदिप श्रेष्ठसँगको करिब दुई वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्धलाई उनले वैवाहिक जीवनमा परिणत गरेकी छिन् । काठमाण्डौको बुढानिलकण्ठस्थित् पार्क भिलेज रिसोर्टमा भव्य समारोहका बीच उनीहरुको विवाह भएको हो ।
तस्विर : वेडिंग ड्रिम्स नेपाल